4 Siyaabaha Bedelka Faylal ay si iPad mini bandhigay isha p
> Resource > iPad > 4 Siyaabaha Bedelka Faylal ay si iPad mini bandhigay isha
Mini The iPad bandhigay isha, oo loo yaqaan iPad mini 2, waxaa soo socda ka dib bishii November. Tan labaad mini iPad waxaa ku shaqeeya ay A7 jab cusub oo la naqshadaha 64-yara, taas oo ka dhigaysa ay u maamulaan si ka dhaqso badan sidii qarniyadii hore iPad. Its 2048 * 1536 xallinta sare ka dhigaa sawir kasta oo cajiib ah oo faahfaahsan oo firfircoon. Haddii aad tahay oo ku saabsan in ay iibsadaan ay iPad mini cajiib ah 2, aad isha ku hayn karaan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan iPad mini 2 iibsiga file ka hor. Markaas, kadib marka mini iPad 2, aad qaban karaa iyada oo aan ka kaaftoomi kasta. Qaybaha hoos ku qoran liiska 4 siyaabo si ay u gudbiyaan files si mini iPad 2. Read oo ku dooran hab ugu fiican.
Habka 1: files Transfer in iPad mini la isha bandhigay la Lugood
Habka 2: files Copy in iPad mini la isha bandhigay via iCloud gurmad
Habka 3: dhaqaaq files ka computer si iPad mini 2 la TunesGo
Habka 4: Demi files ka ah iDevice / Android / Nokia phone in iPad mini 2
Habka 1: Saxiixa files si iPad mini la isha bandhigay la Lugood
Iyadoo Lugood, in aad sidoo kale awoodo music u hagaagsan, sawiro, xiriirada, iyo in ka badan in ay iPad mini bandhigay isha ama ay u soo celin la file ah oo gurmad ah.
1. Soo Celinta iPad mini bandhigay isha la gurmad Lugood ah
Hadii aad waligaa xoojiyaa hore iPhone, iPad ama iPod in Lugood, aad u soo celin kartaa iPad mini bandhigay isha ee hadda. Iska akhriso tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Orod Lugood on your computer Windows ama Mac.
Tallaabada 2. Isku aad iPad mini bandhigay isha ee kombiyuutarka.
Tallaabada 3. Ka dib markii la ogaado, aad iPad mini bandhigay isha muujinaysaa ilaa galeeysid bidix ee suuqa kala Lugood.
Tallaabada 4. Under AALADAHA , guji si aad iPad mini bandhigay isha si ay u muujiyaan page kooban.
Tallaabada 5. Tag hayaan category oo guji Soo Celinta kaabta ... .
Tallaabada 6. In wada hadal pop-up ah, doortaan file gurmad ah oo guji soo celi.
Tallaabada 7. Hubi in aad iPad mini bandhigay isha ku xiran ka hor habka loo soo celiyo waa la dhameeyay.
2. nidaameed files ka computer si iPad mini bandhigay isha
Oo weliba waxaa tab Kooban, waxaad ka arki kartaa Apps, Music, Movies, Podcasts, Lugood U, Books, Photos iyo Info tabs. Riix kasta oo u hagaagsan faylasha baahisey in aad iPad mini bandhigay isha.
Fiiro gaar ah: Tan iyo markii ay jirto tab Info ee Lugood ku Mac lahayn, oo aad isticmaali karto si aad u hagaagsan Lugood xiriirada ka Google, Yahoo !, Hotmail oo dheeraad ah si aad u iPad mini bandhigay isha.
Habka 2: Koobiyee files si iPad mini la isha bandhigay via gurmad iCloud
iCloud sidoo kale waa mid caawisa oo ku wanaagsan marka aad rabto in la soo celiyo aad iPad mini bandhigay isha. Waxaad isticmaali iPad mini bandhigay isha Markii ugu horeysay, waxaad arki doonaan tilmaamaha ku-shaashadda. Iyaga raac ah in ay doortaan afka, dalka, in uu doorto in si ay awood adeegyada goobta, oo wuxuu qotomiyey shabakad Wi-Fi. Marka shaashada in uu kuu sheegayaa si aad u iPad lagu muujiyay, in aad doorato waa in Celinta kaga imaanayo iCloud. Markaas, dooro file ah oo gurmad ah. ID Apple iyo password aad u isticmaashay in ay gurmad file waa in aan marnaba la illoobayn.
The TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) waa barnaamij lagu kalsoonaan karo iPad kala iibsiga file, kaas oo si fiican u shaqaynayaan in wareejinta music, filimada, xiriirada, Lugood U, Podcasts, Music video, waxa ay muujinaysaa TV iyo audiobook in aad iPad mini 2, iyo kuwa kale ee Sida goobaha. Tutorial hoose wuxuu idin ​​Toosiya habka laga tegaya files ka computer si iPad mini 2.
Waxaan soo bandhigi doonaa shaashadda Windows iyo tallaabooyinka hoose si aad tixraac. Hawlgallada ayaa ku dhow yihiin isla marka aad isticmaasho Mac ah. Aan ka bilaabaan!
Tallaabada 1. Isku aad iPad mini 2 ilaa kombiyuutarka
Isticmaal USB ah cable Apple in ay ku xidhmaan aad iPad mini 2 kombuyuutarka. U hubso in xiriir uu yahay guul u bilaabaan barnaamijka lagu rakibay TunesGo. Barnaamijka waxaa si toos ah loo ogaado doonaa iPad mini 2 iyo tuso faylasha ay khaanadda bidix ee suuqa hoose.
Tallaabada 2. files Copy in iPad mini 2
Media, playlists, sawiro, xiriirada iyo qaybaha farriimo waxaa lagu muujiyey qaybta bidix. Media waxaa ka mid ah muusikada, filimada, Lugood U, podcasts, videos music, bandhigyada TV iyo audiobook. Dooro category ah oo guji si ay u galaan suuqa kala maamulka ay. Ka dibna riix Add ama Import / Dhoofinta in aad nuqulka aad files doonayay in aad iPad mini 2.
Fiiro gaar ah: Messages noqon karaa oo kaliya dhoofinta iyo taageeray in muddo ah. Ka sokow, version Mac ka gelineya inaad dajiyaan music, video iyo sawiro, aan ay ka mid yihiin xiriirada, playlists iyo fariimaha.
Dareen sida faylasha ka phone Nokia, Android / kiniin bedelanaya ama xitaa iDevice in aad iPad mini 2? Wonderhsare ayaa MobileTrans yahay oo dhan aad u baahan tahay. Waxaa loo sida qalab kala iibsiga phone fiican, Wondershare MobileTrans ka caawinaysaa in aad wareejiyo dhammaan dadka ay khuseyso, sawiro iyo music aad iPad mini 2 gudahood 1 click. Waxaad ku raaxaysan karaan habka kala iibsiga si degdeg ah oo ammaan ah oo leh qalab kala iibsiga telefoonka oo ka hooseeya waa hage ku faahfaahsan. Waxaa Fiiri.
Waxyaabaha aad u baahan tahay: iPad mini 2, qalab Android / Symbian / macruufka ah, 2 USB fiilooyinka, computer, MobileTrans
Tallaabada 1. Orod qalab kala iibsiga telefoonka iyo xirmaan laba qalab
Si aad u bilaabaan oo leh, ordo qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka. Bareesada in fiilooyinka USB in computer si ay xiriiriyaan iPad mini 2 iyo qalab kale si ay u computer. Ka dib markii la aqoonsado labada qalabka, qalab kala iibsiga telefoonka soo bandhigaan doono suuqa kala hoose.
1 click si ay u gudbiyaan files ka phone / kiniin in iPad mini 2
Symbian (Nokia) si mini iPad 2 iibsiga, videos, xiriirada, music, sawiro Android qalab si iPad mini 2 iibsiga, music, sawiro, videos iyo xiriirada qalab macruufka ah in mini iPad 2 iibsiga, sawiro, xiriirada, videos iyo music
Just riix Start Copy laga bilaabi karo habka kala iibsiga faylka. Hubi in qalabka ma waxaa ineysan ka hor hanaanka wareejinta la dhammeeyo.